Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Voatery nampiasaina mpitandro filaminana ny fanaovana famindram-pahefana -
AccueilSongandinaMinisteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Voatery nampiasaina mpitandro filaminana ny fanaovana famindram-pahefana
Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Voatery nampiasaina mpitandro filaminana ny fanaovana famindram-pahefana
Mazava ny an’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra. Rehefa olona tsy mahay sy tsy mahafehy ary mahafantatra tsara ny olana misy ao amin’ilay minisitera, hoy izy ireo, dia tsy tokony hatao minisitra hitantana io departemanta hiasan’izy ireo io. Olona teknisianina no ilainay, hoy izy.
Noho izany indrindra, raha saika notanterahina omaly tetsy amin’ny foiben’ny minisiteran’ny Paositra etsy Antaninarenina tamin’ny 11 ora atondro ny fifamindram-pahefana teo amin’ny minisitra teo aloha, Neypatraiky Rakotomamonjy sy ny minisitra vaovao, Maharante Jean de Dieu, dia tsy tanteraka izany. Antony, notohanan’ny mpiasa hatramin’ny farany tsy ho tafiditra tao amin’ity minisitera iray ity mihitsy ny minisitra Maharante Jean de Dieu. Nitangorona teo am-bavahady hatrany amin’ny tokontanin’ny minisitera ireo mpiasa tamin’izany. Nobahanan’izy ireo tamin’ilay fiarabe mpitondra mpiasa ihany koa ny vavahadibe fidirana. Tonga ihany koa ny mpitandro filaminana, ary dia tsy neken’izy ireo ny nidirany tao amin’ny minisitera.
Na ny minisitra teo aloha Neypatraiky aza tsy afaka namonjy ny biraony ihany koa tamin’io omaly io. Avelao izy hanao famindram-pahefana amim-pilaminana, hoy ity minisitra teo aloha ity, saingy tsy nanaiky hatramin’ny farany ny olona. Tsy nanaiky fifampiresahana ihany koa ireo mpiasa na dia niezaka nifampiresaka ihany koa aza ny avy amin’ny Mpitandro Filaminana.
Tontosa ihany anefa izany famindram-pahefana izany , omaly hariva. Tsy maintsy nambenana mpitandro filaminana marobe anefa ny fanatanterahana an’izany.
Andraisoro : Nitotorebika ny mponina
Tomefy olona ny tanànan’Andraisoro, ary feno hipoka nanodidina ny kianja filalaovana basikety ny faran’ ny herinandro teo, nandritra ny famaranana goavana ny hetsika “Fety de Basikety”. Fifaninanana teo amin’ny taranja basikety nentin’ny fikambanana sady klioba ...Tohiny
Robert Yamate : Voaantso teny Anosy omaly
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : Nametraka fitokisana tamin’ny Filoha ny Firenena Mikambana